ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “တောသား နှင့် မြို့သူ”
ကျနော့်အမေက ကျနော့်ကို တောဖက်က မိန်းကလေးများနှင့် အိမ်ထောင်ချပေးချင်သည်။ “မယားတောသူ”ဟူသော စကားကိုလည်း တွင်တွင်ပြောလေ့ရှိသည်။ ကျနော်က မိဘပေးစားသည်ကို မလိုချင်။ ကိုယ့်သဘောကိုယ့်ဆန္ဒနှင့်သာ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်ကို ရွေးချယ်ချင်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်နှစ်နှစ်ကျော်ကျော်ကာလက မလေးရှားတွင် ရောက်ရှိကာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့်တိုင် ကျနော်၏ အမေနှင့် အစ်မ များသည် သူတို့ မျက်စိကျသည့် မိန်းကလေးများနှင့် ကျနော့်အား စပ်ဟပ်ကောင်းဆဲ ဖြစ်သည်။ ခက်သည်က အားလုံးမှာ သူတို့မျက်စိကျသူများသာ ဖြစ်သည်။ ကျနော်မျက်စိကျသူများမဟုတ်။ ထိုသူများနှင့် တသက်လုံး တကယ်ပေါင်းရမည့်သူမှာ သူတို့မဟုတ်။ ကျနော်သာ ဖြစ်သည်။ သည်တော့ စကားကို အဆုံးစွန် ပိတ်ပြောထားရသည်။ ကျနော့်စိတ်ထဲက နှစ်သက်နေစေဦးတော့၊ အမေတို့ စပ်ဟပ်ပေးစားတာမျိုးဆိုလျှင် ယူမည်မဟုတ်…ဟု။
အမေတို့အမြင်တွင်မူကား မြို့ကြီးသူများသည် လည်ပတ်သည်။ ခင်ပွန်းဖက်က အဆွေအမျိုးများနှင့် အလိုက်အထိုက် သင့်မြတ်အောင်မနေတတ်။ အကယ်၍ ကျနော်သည် မြို့ကြီးသူကို ယူပါက အလှည့်ခံရမည်၊ ခိုင်းအစားခံရမည်ဟု အထင်ရှိကြလေသည်။ ကျနော်ကလည်း မိဘများနှင့် အစ်မများကိုယ်တိုင်က ကျွန်တော့်အား မအူမလည်ဟု သဘောထားရာ ရောက်သဖြင့် ထိုသို့အထင်ခံရခြင်းကို (မှန်နေစေဦးတော့) မခံချိ မခံသာ ရှိလေသည်။
တောသူတောင်သားတို့သည် ရိုးသားကြသည်ဟူသည်ကား ယေဘုယျအားဖြင့် မှန်ပါသည်။ တောရွာများတွင် မြို့ကြီးပြကြီးများလောက် လူနေမထူထပ်။ သူတို့၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် နေ့စဉ်ဘ၀မှာ မြို့ကြီးပြကြီးများနှင့် နှိုင်းစာလိုက်လျှင် အင်မတန်ပင် ရိုးစင်းလှသည်။ အောက်ဆီဂျင်ပေါများသော လေကောင်းလေသန့်ရသည်။ အပြိုင်အဆိုင်နည်းသည်။ ထိုသို့သောပတ်ဝန်းကျင်သည် အလုပ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုကင်းသော ပတ်ဝန်းကျင် (Stress free society)ဖြစ်ရာ လူတို့၏ စိတ်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကြည်လင်နေသည်။
မြို့ပြတွင်ကား အိမ်မှထွက်၍ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ရောက်သည်နှင့် ကားစောင့်ရခြင်း၊ ကားပေါ်တွင် ထိုင်ခုံလုရခြင်း၊ ကြပ်ကြပ်ညပ်ညပ်တိုးဝှေ့စီးရခြင်း၊ အလုပ်ချိန်မမီလျှင် အရာရှိက အဆူအဟောက်ခံရခြင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ အပြိုင်အဆိုင်များခြင်း စသဖြင့် မပြေလည်မှုပြဿနာများနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုကို အချိန်နှင့်အမျှ ခံနေကြရရာ မြို့ပြရှိလူတို့သည် တောဘက်မှ လူများထက် စိတ်ညစ်ညူးမှုဒဏ်ကို ပိုခံကြရသည်။ စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်ကြသည်။ ထစ်ကနဲဆိုလျှင် ပေါက်ကွဲဘို့ အသင့်ဖြစ်နေသော စိတ်အနေအထားကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
တောဘက်မှလူများကား မြို့ပြမှ လူများကဲ့သို့ တချိန်လုံး စိတ်ဖိစီးမှုကို ခံမနေကြရသဖြင့် ပဋိပက္ခ နည်းပါးသည်မှန်၏။ သို့သော်လည်း ဤအနေအထားမှာ အမြဲတစေ တသမတ်တည်း မှန်ကန်နေသည်မဟုတ်။ အပြိုင်အဆိုင်ပေါ်လာသည်နှင့် သူ့တို့လည်း ပေါက်ကွဲတတ်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် လူစုလူဝေးလုပ်ခွင့်ရသောအခါများတွင် ထိုသို့ပဋိပက္ခများ စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ တောဘုရားပွဲများတွင် ဇာတ်ပွဲကြည့်ရန် ပွဲခင်းထဲ၌ ဖျာနေရာလုရင်းမှ ရန်ဖြစ်ခြင်းများရှိတတ်သည်။ ဥပမာ လယ်ရေလုမှု၊ ကောက်စိုက်ရန် ပျိုးနှုတ်ရန် လူငှားရမ်းသည့်အခါ အချိန်၏ ဖိစီးမှုကို ခံရသဖြင့် အပြိုင်အဆိုင်ငှားရမ်းမှုကြောင့် ပဋိပက္ခများ ကြုံတတ်ကြသည်။
သည်တော့ လူသည် လူသာဖြစ်သည်။ လူသည် ဖိစီးမှုနည်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေရသည့်အခါ စိတ်လက်ကြည်သာ၍ ပဋိပက္ခနည်းသည်။ အတွန်းအတိုက်နည်းသည်။
ထိုရိုးသားသော တောသူတောင်သားများသည် ခေတ်အခြေအနေအရ တောရွာများကို ပစ်၍ မြို့ပြများသို့ တက်ရောက်၍ အလုပ်လုပ်ကြသောအခါ မြို့ပြလူနေမှုစနစ်၏ ဖိစီးမှုများကို၊ မပြေလည်မှုများကို အများနည်းတူ ကြုံတွေ့ကြရလေတော့သည်။ ပင်ကိုယ်စရိုက်အေးဆေး၍ ကြောက်တတ်သောသူများအဖို့ ထိုအခြေအနေတွင် အရာရာကို ခေါင်းငုံ့ခံတတ်ပြီး သူတကာ၏ လူလည်ကျမှုကိုလည်း အမြဲတစေခံရတတ်ရာ တောသားလူရိုး ဘွဲ့ကို ရတတ်ကြပေသည်။ နာမည်ကောင်းသော်လည်း သက်သာလှသည်မဟုတ်။ တဖန် မဟုတ်မခံသမားများအနေဖြင့်လည်း ပြဿနာဖြေရှင်းရာတွင် မြို့ပေါ်တွင်ကြီးပြင်းသော မြို့သားများကဲ့သို့ ပရိယာယ်ကြွယ်ဝစွာမဖြေရှင်းတတ်သဖြင့် “တောသားရဲ ဆွဲထုတ်” ဆိုသော အခြေအနေများသို့ ရောက်လာပြီး မြို့ပြနှင့် အံမ၀င်ခွင်မကျ သော ဘ၀အနေအထားများ ဖြစ်တတ်လာလေသည်။
တဖန် မြန်မာသတင်း၊ မီဒီယာများ၊ ဘလော့ဂ်များတွင် မြန်မာလူမျိုးသည် အခြားလူမျိုးများထက်ပင် ရိုးသားသယောင်၊ ဖော်ရွေသယောင်၊ ယဉ်ကျေးသယောင် အလွန်အကျူးရေးသားသည်ကို အစဉ်လိုလို တွေ့ရလေသည်။ မည်သူများက ရေးနေကြသနည်း။ အများစုမှာ မြန်မာများက ရေးနေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ကျနော် မလေးရှားတွင် အလုပ်လုပ်စဉ်က မလေးရှားရှိ ကျေးလက်တောရွာများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ရသည်။ ထိုတောရွာများ၊ မြို့ငယ်များမှ မလေးလူမျိုးများသည်လည်း ရိုးသားမှု၊ ဖော်ရွေမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုများမှာ မြန်မာလူမျိုးအောက် မလျော့ပေ။ အလားတူပင် ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ စသည့်နိုင်ငံများမှ လူများသည်လည်း အထူးဖော်ရွေကြသည်ဟု ကြားဖူးသည်။ သြစတေးလျသို့ ကျွန်တော်ခဏတဖြုတ်ရောက်စဉ်မှာပင် ထိုသူတို့၏ ဖော်ရွေတတ်မှု ပျော်ရွှင်တတ်မှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသေးသည်။ တလောက မဒမ်ပေါတယောက် ကမ္ဘောဒီးယားသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရာ ကမ္ဘောဒီးယားမှလူများသည်လည်း မြန်မာလူမျိုးများနှင့် မခြားနားလှသည် တွေ့ခဲ့ရသည်ဆို၏။
စင်္ကာပူတွင် အလုပ်လုပ်သည့်အခါ လူမျိုးပေါင်းစုံနှင့် ထိတွေ့ရသည့်အခါ ရိုးသားမှု၊ ဖော်ရွေမှု၊ ယဉ်ကျေးပျူငှာမှုများမှာ လူမျိုးနွယ်အပေါ်တွင် မူမတည်၊ နေရာဒေသပေါ်တွင်လည်း မူမတည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားနှင့် လူတဦးတယောက်ချင်း၏ စိတ်အနေအထားပေါ်တွင်သာ မူတည်ကြောင်း ကျနော်နားလည်လာသည်။
ဥပမာ ရိုးသားဖော်ရွေလှသည်ဟူသော မြန်မာကျေးလက်ဒေသတခုကို စည်ကားလှသော မြို့ပြတခုအသွင်သို့ ကူးပြောင်းတည်ဆောက်လိုက်ပါက ထိုဒေသရှိလူများသည် ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်း မြို့ပြ လူနေမှုအသွင်သို့ ကူးပြောင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျေးလက်တောရွာဓလေ့ထုံးစံများပျောက်ကာ မြို့ပြ၏ စရိုက်လက္ခဏာများကိုသာ တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ တောတွင် ရေတပေါက် တောင်းသောက်၍ လွယ်ကူသည်မှာ ထုံးစံဖြစ်နေ၍သာဖြစ်သည်။ ထိုတောသည် စက်ရုံတခုဆောက်သဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားစီးပွားရေးအကွက်အကွင်းတခုကြောင့်သော်လည်းကောင်း မြို့ပြဖြစ်လာလျှင် ရေတောင်းသောက်ရန် လွယ်တော့မည်မဟုတ်။ ဤသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်တွင်လိုက်၍ ဓလေ့ထုံးစံတခု ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအဖြစ်မျိုးကို မြို့ပြစနစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားတိုင်း ကြုံတွေ့ရမည်သာဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် မြို့သူမြို့သားများသည် တောသူတောင်သားအများစုထက် လူရည်လည်သည်ဆိုသည့် အချက်ကိုတော့ လက်ခံရပေမည်။ လူရည်လည်ခြင်းနှင့် လူလည်ကျခြင်းသည် တခြားစီဖြစ်သည်။
မြို့သူမြို့သားများတွင် လူရည်လည်သော်လည်း လူလည်မကျတတ်သည့် လူအများအပြားရှိသလို တောသူတောင်သားများတွင်လည်း လူရည်မလည်ဘဲနှင့် လူလည်ကျတတ်သူ အများအပြားရှိသည်ကို ၀န်ခံကြရပေမည်။
ထို့အတူ ရိုးအခြင်းနှင့် ရိုးသားခြင်းသည်လည်း တခြားစီဖြစ်သည်။ မြို့သူမြို့သားများတွင် မရိုးအသော်လည်း ရိုးသားသူအများအပြားရှိသလို တောသူတောင်သားများတွင်လည်း ရိုးအသော်လည်း မရိုးသားသူအများအပြား ရှိနေနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် တောသူတောင်သား ရိုးသည် ဆိုတိုင်း ရိုးသားသည်ဟု မဆိုလိုနိုင်ကြောင်း ခွဲခွဲခြားခြား နားလည်သင့်သည်။ အချို့သူများသည် မိမိ၏ ရိုးအမှုကို ရယ်စရာအဖြစ်တခုသော်လည်းကောင်း၊ သနားဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်တခုအဖြစ်သော်လည်းကောင်း ဖွင့်ဟ ၀န်ခံလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သူ့အားရိုးသားသူဟု အခြားသူများ အထင်ရောက်လိမ့်မည်ဟု လွဲမှားစွာ ယူဆနေကြဟန်ရှိသည်။ ရိုးအခြင်းနှင့် ရိုးသားခြင်းသည် တခြားစီသာဖြစ်သည်။ ရိုးအသူတိုင်းသည် ရိုးသားသူမဖြစ်နိုင်ပါ။ ရိုးအပြီး မရိုးသားသူများကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မြင်တွေ့နေရသည်။ ထို့အတူ လူရည်လည်ပါးနပ်သော်လည်း ရိုးသားသူများကိုလည်း နေ့စဉ်လိုလို မြင်တွေ့နေရပါသည်။
ထို့ကြောင့် တောသူတောင်သား ရိုးသားသည်၊ မြန်မာလူမျိုး ရိုးသားသည် ဆိုသောစကားများနှင့် အခြားလူမျိုးများ၊ မြို့သူ/မြို့သားများသည် လူလည်ကျတတ်သည်၊ ကလိန်ကကျစ်ကျတတ်သည် ဆိုသည့်စကားများမှာ မှားယွင်းသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုများဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလျှင် Stereotyping သို့မဟုတ် Prejudice ဟု ခေါ်ဆိုရမည်ထင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရိုးအသူများ၊ ရိုးသားသူများ၊ လည်ပတ်သူများ၊ လူလည်ကျသူများ၊ ဖော်ရွေသူများ၊ မဖော်ရွေသူများ၊ ယဉ်ကျေးသူများ၊ မယဉ်ကျေးသူများကို လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်း၊ နိုင်ငံတိုင်း၊ မြို့တိုင်း၊ ကျေးလက်တိုင်း၊ တောရွာတိုင်းတွင် တွေ့နိုင်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်လေသည်။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, July 5, 2009
ဒါပေမဲ့ ဆက်ရေးဖို့ ကျန်သွားသလိုပဲ။ တောသားနဲ့ မြို့သူ အကြောင်း။
>>Rita....<<<< မဒမ်ပေါကလည်း ဖတ်ပြီးလျှင်ပြီးချင်း အလားတူပဲ မှတ်ချက်ချကြောင်းပါ။း-) .....
အရင်ပို့စ်ဖတ်ပြီး ဘလော့ရေးဖို့ အလိုက်သိတဲ့ အားပေးတဲ့ တိုးတိုးဖော် ရှိတယ်ဆိုတော့ ဒီပို့စ် မဒမ် နှင့် အန်ကယ် ပေါတို့ အကြောင်းလေလား အောက်မေ့မိသေး
မဟုတ်မှ လွဲ ရော ဇာတ်ဝင်ခန်းများ ဆင်ဆာတိုးသွားတယ် ထင်တယ်။
Ko Paw.... I absolutely agree with you. Humans are humans.
ဟုတ်တယ် တောသားနဲ့ မြို့သူဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ် နိဒါန်းမှာ ဒါနဲ့ပဲ စထားတယ်။ ဒီအကြာင်းပဲ ရေးမလားလို့ စိတ်ဝင်စားပြီး ဖတ်လာတာ အဲဒီအကြောင်းကို အဓိက မရေးပဲနဲ့ တခြားအကြောင်းတွေကို ရေးထားတာ ပိုများနေတယ်။ အဆုံးသတ်တော့လည်း ဒီအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ အစပျိုးထားပြီးသား ဖြစ်လို့ တောသားနဲ့ မြို့သူအကြောင်းကို ဆက်ရေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။